Posted by T T Sweet at 1:55 AM
ဝက်ဝံလေး July 14, 2009 at 2:28 AM
တီတီဆွီ အင်ဥ လာစားသွားတယ်နော်
မိုးကောင်းသူ July 14, 2009 at 4:18 PM
မမတီတီဆွိ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကတောင် ကိုယ်တော်ကြီးနဲ့ပြောနေကြသေးတယ်။ အင်ဥကြော်စားချင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း။ လောလောဆယ်တော့ အစ်မဆီကနေပဲ စားသွားတယ်နော်။
သက်ဝေ July 15, 2009 at 1:02 AM
မစားဖူးမှန်းသိရက်နဲ့ ကျွေးမယ်တော့ မကြံဖူး
လွမ်းနေတာကြာ... ပြန်တွေ့ရတာ ဝမ်းသာ...
tin min htet July 15, 2009 at 1:32 AM
ရန်ကုန်မှာ အင်ဥရှိပါတယ် တီတီဆွိရယ် ..
ရာသီတိုင်း စားနေကြပါ ..
တက်တာတော့ တော်တော်တက်တယ် ..
Vista July 17, 2009 at 1:50 PM
အကြိူက်တကာ.အကြိူက်ဆုံးပါ အင်ဥ ဆိုတာ ..ငိုချင်လာအောင်လုပ်ရက်တယ်နော်
မေ့သမီး July 19, 2009 at 12:17 PM
Rita August 16, 2009 at 6:07 PM
ကျွန်မတို့ အညာမှာတော့ မရှိဘူး မမရဲ့။ အောက်ဘက်ရောက်မှ အင်ဥ စားဖူးတာ။ ဖြူးမှာနေတုန်းက အမုန်းစားခဲ့ရတာပေါ့။ သိပ်လက်ဝင်တယ်။ သိပ်ကြိုက်တာပဲ။ ရှလွတ် !
T T Sweet August 16, 2009 at 8:31 PM
ကိုထက်နဲ့ ရီတာရေ ..
အစ်မတကယ် ရန်ကုန်မှာမစားဖူးဘူး ... အမေတို့ကပဲ စားကျင့်မရှိလို့ မ၀ယ်တာလားမသိ .. . စစ်ကိုင်းဘက်က အမျိုးတွေအိမ်ရောက်မှ စားဖူးတာ ... စစ်ကိုင်းဆိုတော့ အညာပေါ့နော် ... မြစ်ဝကျွန်းပေါ်က သစ်တောတွေမှာတော့ ပိုပေါမှာပေါ့။
ama yae.. This Ing oo is my favourite.. It is hard to get find..
T T Sweet March 7, 2012 at 12:02 AM
စင်္ကာပူလိုနေရာမျိုး အင်ဥရဖို့တော့ ခက်သားပဲပေါ့။ အဲဒါ လာအိုကလာတဲ့ သူငယ်ချင်း မလေဒီက သယ်လာပေးလို့ အ၀စားရတာ။ လာအိုတွေလဲ အင်ဥတော်တော်စားတယ်နဲ့တူတယ်။ အစ်မတို့လဲ အသက်တော်တော်ကြီးမှ အဘွားချက်ကျွေးလို့ စာဖူးတာ။
is it? Loas has Ing Oo.. oh.. i do not know about that. My mom used to cook for us. Hardly can buy Ing Oo in bazzar. Sometime we can buy it at 30th street (i think that street is 30th street I am not sure). infront of American Version, there areafew vege sellers... We can find there sometime when we go and make eye check up. But I don't stay at down town. We live at N/Dagon :D....